Izinto ezi-6 ekufuneka uzenzile emva kokufaka iLinux Mint 19 Tara | Ubunlog
UJoaquin Garcia | | Linux mint, Tutorials, Ubuntu
Inguqulelo entsha yeLinux Mint isandula ukuphuma. Kwaye uninzi lwenu lwenza ukucoceka okucocekileyo, okanye ukuze nibone emva kokuthandwa kweLinux Mint kwiDrawrowatch.
Abasebenzisi abaninzi abenze olu fakelo zii-newbies okanye abasebenzisi beGnu / Linux bexesha lokuqala. Kungenxa yoko le nto siza kukuxelela Imisebenzi emi-6 ekufuneka siyenzile ukuphucula ukusebenza kweLinux Mint 19 Tara.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba le nguqulo intsha I-Linux Mint isekwe kwi-Ubuntu 18.04 LTS , ke ngoko izisa utshintsho ngakumbi kunakwiinguqulelo zangaphambili.
1 1. Hlaziya inkqubo
2 2. Ukufakwa kweekhowudi zemultimedia
3 3. Nika amandla ifomathi ye-snap
4 4. Ukufaka iinkqubo ezizithandayo
5 5. Khusela umbono wakho
6 6. Yenza ugcino
1. Hlaziya inkqubo
Uluntu lweLinux Mint luyasebenza kwaye yiyo loo nto ukusukela kumhla wokumiliselwa de sifake inguqulelo entsha kunokubakho uhlaziyo olutsha okanye iinguqulelo zangoku zenkqubo engaqhelekanga. Ke into yokuqala ekufuneka siyenzile kukusebenzisa lo mthetho ulandelayo:
Oku iya kuhlaziya yonke inkqubo yokusebenza kunye neenguqulelo ezintsha zephakeji nganye.
2. Ukufakwa kweekhowudi zemultimedia
Uninzi lwenu (mna ngokwalo ndibandakanya) ukusebenzisa iinkqubo zemultimedia ezinje ngabadlali bevidiyo, abadlali bezandi okanye babukele iividiyo ngeYouTube. Ke imetapackage yemultimedia codec kufuneka ifakwe. Oku kwenziwa ngokusebenzisa lo myalelo ulandelayo:
3. Nika amandla ifomathi ye-snap
Nangona iLinux Mint 19 Tara isekwe kwi-Ubuntu 18.04, ifomathi ye-Snap ayenziwanga yasebenza kwaye asinakho ukusebenzisa usetyenziso kwifomathi ye-snap. Oku kusonjululwa ngokwenza lo mthetho ulandelayo:
4. Ukufaka iinkqubo ezizithandayo
Nangona unikezelo lunayo yonke into esiyifunayo, kuyinyani ukuba ixesha ngalinye Kuqhelekile ukufaka ezinye iintlobo zeenkqubo ezinje ngeChromium endaweni yeFirefox, iKdenlive okanye iKrita endaweni yeGimp. Oku kuya kuxhomekeka kulowo nalowo kwaye ufakelo lunokwenziwa ngomphathi wesoftware yeLinux Mint okanye kwisiphelo sendlela. Ngayiphi na imeko akuyi kubakho ngxaki ingako ekufakweni kwale software.
5. Khusela umbono wakho
Inguqulelo entsha yeLinux Mint izisa nayo Inkqubo yeRedshift, inkqubo etshintsha ukukhanya kokukhanya kwescreen ngokuxhomekeke kwixesha esinalo, ngaloo ndlela usebenzisa icebo lokucoca ukukhanya elidumileyo. Ukuba siyayifuna, kufuneka siyiphumeze kwaye siyongeze kwimenyu yezicelo ekuqaleni. Lo msebenzi ulula kodwa awenziwa ngokungagqibekanga.
6. Yenza ugcino
Emva kwawo onke amanyathelo angaphambili, ngoku lixesha lokuba usebenzise isixhobo esitsha seLinux Mint 19 Tara, yile TimeShift. Esi sixhobo sinoxanduva lokwenza iikopi ezikhuselayo zenkqubo yethu.
Nje ukuba sikwenze konke oku kungentla, siza kwenza i-backup okanye i-snapshot ukuze kwixesha elizayo, ujongene neengxaki zenkqubo, sinokubuyisela inkqubo yokusebenza kwaye sibe nayo ngokungathi ibilusuku lokuqala, akangekhe atsho ngcono.
Onke la manyathelo abalulekile kwaye iyafuneka ukuphucula ukusebenza kweLinux Mint 19 Tara. Kwaye ukufakwa kweTimesShift kube luncedo kakhulu njengoko kusivumela ukuba senze ukhuphelo emva kokufaka iLinux Mint 19 Tara.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » Izinto ezi-6 ekufuneka uzenzile emva kokufaka iLinux Mint 19 Tara
Molo, enkosi ngezithuba, ozipapasha ngeLinux kunye nenkqubela phambili entsha. Ndingumsebenzisi othanda ukuzama ezi Ubuntu kunye neLinux OS, kwaye eyokugqibela endiyifakileyo kwaye ebonakala ibalaseleyo, ubuncinci kum, yiLinux Sarah, engazange indiphumelele.
Ndingathanda ukwazi ukuba le nguqulo intsha isebenza ngcono kune-LM Silvia, kuba xa ndifuna ukuyivuselela, kuye kwafuneka ndibuyele kule yangaphambili.
Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho ngezi zinto zivulekileyo ze-OS.